Haweenka xijaaban oo xiisenaya in la baro si la isku difaaco - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Haweenka xijaaban oo xiisenaya in la baro si la isku difaaco
La daabacay måndag 24 april kl 16.00
Welwel iyo baqdin
Gabdho xijaaban oo dalka Boosniya ku nool. Sawirkani ma khuseeyo mawduuca. sawir: Amel Emric
Tirada haweenka muslimka ah ee xiseenaya in ay bilaaban barashada difaaca ayaa kordhay wixii ka dambeeyay weerarkii argagaxiso ee ka dhacay magaalada Stockholm 7-dii abriil 2017, sida uu sheegay Stefan Sandrén oo ka hawlgala Självförsvarsskolan oo ah shirakada bixisa casharrada is-difaaca.
Weerarkii argagaxiso ee horraantii abriil ka dhacay dhabbada Drottninggatan ee magaalada Stockholm ayaa baqdin iyo welwel ku abuuray haweenka muslimka ah ee xijaabaan. Mid ka mid ah kuwan ayaa ah gabadh magaceedu yahay Soniya. Waxeey ku nooshahay magaalada Stockholm. Waxaaney sheegtay in dhowr jeer la aflagaaday ka dib weerarkaas.
Sabtidii ina soo dhaaftay ayey iyadu iyo tiro gaadhsiisan 20 haween oo muslim ah lokaal ku yaala magaalada Stockholm ku qaateen xiisad halka lagu baray si ay isku difaacaan hadii la weeraro.
-Maanta waxaan halkan u yimid in aan ahay gabadh muslim ah oo xijaaban. Waxaan ahay gabadh hore af-lagaado loo geeystay, taasi na waxeey xidhiidh la leedahay labiskeeyga. Waxaan dareemaya in la daba joogo, khaasatan ka dib dhacdadii Drottninggatan.
Soniya ayaa sheegtay in ay baqdinta awgeed todobaadkii ugu horeeyay ka dib weerarkii argagaxiso joojisay in ay agagaarka Drottninggatan tagto, waxeey sheegtay in ay dareensantahay faraq weyn ka dib weerarka iyo habka loo eego marka ay magaalada marayso. Meesha keliya aan kalsooni ku qabo in aan sida aan doonayo u maro ayaa ah xaafadaha Rinkeby iyo Husby, ayey sheegtay Soniya.
Stefan Sandrén ayaa ka hawlgala Självförsvarsskolan oo ah shirakada xiisadaha difaaca bixiya.
-Waxaan barnay si lisku difaaco hadii u qof ku weeraro amba isku dayo, si madaxa looga ilaaliyo qofka ku talo jira in uu ku dhaawaco. Weligeey inta aan halkan ka shaqeeynayay ma arkin in intaas haween muslim ah isku mar dalbadeen waxbarashadan. Sababtu na waxaa weeye dhacdadii Stockholm sidan anigu u arko iyo sida ay gabdhahani u sheegeen.
Badanka kuwa dhibka ku hayya haweenkan ayaa ah dad aan aaminsaneeyn diinta islaamka ah, waa dad asal- ahaan u dhasay dalkan amba ah ajaanibta kale, ayuu u jeeda Stefan.
Nora ayaa iyaduna ka mid ah haweenka qaadanaya xiisada difaaca. Sida Soniya ayey doonaysa in ay is difaacdo hadii la soo weeraro, laakin, ayey sheegtay, in ay aaminsantahay in badanka dadyowga dalkani fahansanyihiin in ninka weerarka ka dambeeyay Rakhmat Akilov ahin muslim rasmi ah.